Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya oo loo qaybiyay qaraar ka dhan ah dawlada keenya – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya, ayaa waxay maanta kulan ballaaran ay ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka Ee Magaalada Muqdisho, waxaana shir guddoominaayay, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, Gudoomiyaha Baarlamaanka, iyadoona ay ku wehlinayeen Ku Xigeenadiisa.
Qaraarkan oo ka kooban lix qodob, ayaa waxaa soo diyaariyay Guddiyada Arrimaha Dibadda & Gudaha Ee Baarlamaanka Somaliya, waxaana Xildhibaanada u akhriyay Xildhibaan Prof. Maxamed Cumar Dalxa.
Qodobadan, ayaa sidatan u qornaa:-
In Xukuumadda ay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobe, Ururada Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika iyo Midowga Yurub weydiisato, sidii Ciidanka Kenya looga saari lahaa dhulka Somaliya iyo hawlgalka Amisom, laguna bedelo ciidan dal kale ka socdo
In Kenya ay ka fogaato burburinta iyo tirtiradda caalaamadaha xuduudihii ay dhigeen dowaladihii isticmaarka ee u dhaxeeyay labada dal
In Kenya ay joojiso dhismaha derbiga si deg deg ah
In Kenya ilaaliso xiriirka walaaltinimo iyo saxibtinimo ee ku saleysan deris wanaagga
In la baajiyo xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka abuurmi kara sii wadida dhismaha sharci darrada ah
Si loo abuuro jewi ku dhisan kalsooni iyo is aaminaad in muddo kooban gudaheed, dowladda Kenya kala baxdo ciidameeda guud ahaan Somaliya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya oo wixii intaa ka dambeeyay Xildhibaanada ugu baaqay inay u codeeyaan qaraarkaasi, haddii lagu dhaqaaqi lahaa iyo haddii kalaba, ayay cod aqlabiyad leh ugu codeeyeen in lagu dhaqaaqo.
Qaraarkan, ayaa waxaa u codeeyay 160 Xildhibaano, iyadoo laba oo keliya ay diiday. Qaraarkan ayaa noqonayo mid sharci ah, sida uu ku dhawaaqay Prof. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.